Thu, Feb 25, 2021 | 00:03:19 NST
मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग : व्यवसायीको दादागिरी टुलुटुलु हेर्दै जनप्रतिनिधि
सिन्धुपाल्चोक, वैशाख २७ – इन्द्रावती नदीमा क्रसरले बनाएको असंख्य खाल्डाले नदीको स्वरुप नै बिगारेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि शुक्रबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।
स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस हुँदा १४ चरणको प्रकृयाबाट योजना छनोट गर्दै आएको त धेरैलाई जानकारी नै छ । बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो ।
​टहराको उकुसमुकुस : पढ्दापढ्दै मुर्छा पर्छन् विद्यार्थी
गोरखा, वैशाख २६ – चार वटा ब्लक, १४ वटा कोठा अनि अफिसका लागि अर्को छुट्टै ब्लक ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर जनभावना अनुसारको पहिलो राम्रो काम गरेको सरकारसित नागरिकले सोध्न थालेका छन् – सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालक दलले ऐन अनुसारको सुविधा कहिलेदेखि पाउने ?
बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री गभर्नर शीतयुद्ध, पहिलोपटक बजेट निर्माण टाेलीमा अटाएनन् गभर्नर
काठमाडौं, वैशाख २५ – देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र रहेको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले भिडभाड बढ्न थालेको छ ।
वैशाख २३ गते आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लीला अधिकारी र इन्जिनियर विजेन्द्र श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
मोदीको नाममा जनकपुरमा चमत्कार : २० वर्षमा नभएको काम १० दिनमै
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने टुंगो लागेदेखि नै जनकपुरमा सरकारी निकाय व्यस्त बनेको छ ।
​नेताका सहकारी नै ठग, स्वरोजगार कोषको १२ करोड जोखिममा, सम्पत्ति रोक्काको तयारी
काठमाडौं, वैशाख २३ – युवालाई देशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईकाे सक्रियतामा सरकारले युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गर्‍याे ।
जागिरका नाममा ठगी धन्दा, विज्ञापन छापेरै करोडौँ कमाउँछन् ठगहरु
‘तु कर्मचारी आवश्यकता, नो इन्टरभ्यू । शतप्रतिशत रोजगारीको ग्यारेन्टी । पार्टटाइम, फुलटाइम, अफिस भित्र र घरैमा बसेर काम गर्न सकिने । पढे नपढेका गृहिणी जो कोहीले पनि काम गर्न मिल्ने । तलब न्यूनतम ७ देखि अधिकतम् ४० हजार रुपैयाँसम्म ।’
फाट्टफुट्ट चलेका गाडी । सार्वजनिक बस, माइक्रो भन्दा कार र मोटरसाइकलको लस्कर । झट्ट हेर्दा यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको शुक्रबारको बन्द एकदिनका लागि झण्डै तीन महिनासम्म व्यहोरेको नाकाबन्दी जस्तै थियो ।
सुन्दरबजार मिलनचोककी चिजामाया गुरुङका श्रीमान भारतीय सैनिक हुनुहुन्छ । केही वर्षअघि उहाँ पनि श्रीमानसँगै भारत जानुभयो । श्रीमानसँगै घुमफिर गर्न भारत गएकी उहाँलाई सीप सिक्ने रहर पलायो ।
जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न धमाधम तयारीका काम भइरहेको छ ।
डाक्टर डीएसपी एक्सनमा : जुवातास ठप्पै, ड्रग्सवालाको भागाभाग
जुम्ला, वैशाख २० – कर्णाली प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र साविकको कर्णाली अञ्चलको मुकाम जुम्ला अहिले जुवातासरहित बनेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र : सरकारकै कारण विपन्न समुदाय ऋणमा डुबे
गोरखा, वैशाख २० – सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा गोरखामा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
मालपोत कार्यालयको यस्तो बिजोग : महत्वपूर्ण कागजपत्र जोगाउनै मुश्किल
सप्तरी, वैशाख १९ – मालपोत कार्यालयको भवन जीर्ण भएकाले महत्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ भवन सञ्चालनमा नआउँदै चुहिन थालेको छ ।
कमाई १० हजार, खर्च २५ हजार, कसरी चल्छ गुजारा ?
काठमाडौं, वैशाख १८ – बढ्दो महंगी र सिमित तलबमा दैनिक गुजारा चलाउनु अधिकांश नेपालीको बाध्यता हो ।
समुन्द्र सतहबाट १८ सय मिटर उचाइमा रहेको नागीडाँडामा जतिबेला पनि मौसम सफा हुने र स्थानीयबासिन्दाको विरोध नभएकाले उच्च प्राथमिकतामा परेको मन्त्री अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
सीप सिके सुख, नसिके दुःखै दुःख
काठमाडाै‌ं, वैशाख १८ – लहान घर भएका रामअवतार सदार उमेरले २१ वर्षका भए । सदार काठमाडाैं थापाथली बागमती किनारछेउ निर्माण भइरहेको एउटा सार्वजनिक भवनमा काम गरिरहेकाछन् ।
कहिलेसम्म भूकम्प प्रभावितका आँखामा आँसु ?
सेतै फुलेका केश । बृद्ध शरीर । आँखामा चश्मा । लौरोको सहारामा हिँड्दै जीवन बिताइरहनुभएको छ पूर्णमाया परियारले ।
​युवापुस्ताको साकेला आकर्षण, रमाउँछन् मात्र महत्व बुझ्दैनन्
काठमाडौ, वैशाख १७ – पुर्खाैली घर धनकुटा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौंमा रहेका विश्वनाथ राई ललितपुरको नख्खिपोटमा भइरहेको उभौली साकेलामा रमाइरहेका थिए ।
​यसरी मनाइन्छ चण्डेश्वरी जात्रा
काभ्रे, वैशाख १७ – हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल चण्डी पूर्णिमाको दिन बनेपाको २७ गाउँलेले मनाउँदै आएको आरध्यदेवी चण्डेश्वरीको ऐतिहासिक जात्रा सुरु भएको छ ।
यो वैशाख हो कि असार ?
केही दिनदेखि लगातार मौसम बदली भएको छ । मौसम धुम्म हुन्छ, एकैछिनमा घाम लाग्छ, फेरि बादल देखिन्छ र पानी पर्छ ।
सातवटै प्रदेशले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
यार्साको लोभले बर्सेनी जान्छ ज्यान, सुरक्षामा गाउँपालिका र नगरपालिका मौन
बझाङ, वैशाख १५ – बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा टिप्ने मौसमको सुरुवातमै यसवर्ष बझाङको साइपाल गाउँपालिका–३, का २० वर्षका भीनबहादुर बोहराको हिमाली क्षेत्र फरालखेत भन्ने ठाउँमा हिँउ पहिरोमा पुरिएर ज्यान गयो ।
मौरी पालेरै वार्षिक १४ लाख आम्दानी – ‘पैसा कमाउन विदेश जानु पर्दैन’
बार्दली हालेको घर । वरिपरि मौरीका घारको चाङ । मुढे घारदेखि आधुनिक घारमा मौरीपालन । गाईभैँसीको गोठका झ्याल र बारीको डिलमा मौरीका घारको लस्कर । बेला बेलामा मौरीको हेरचाह ।
नागरिकको गुनासो : सोध्दा–सोध्दा हैरान भइयो धरहरा कहिले बन्छ ?
काठमाडौं, वैशाख ११ – सुन्धारामा पानी नआएको वर्षौँ भइसक्यो ।
नमूनाको रुपमा पुनर्निर्माण हुँदै भक्तपुरका सम्पदा
भूकम्पमा ढलेका भक्तपुरमा ऐतिहासिक सम्पदाहरु धमाधम ठडिँदैछन् ।
​भूकम्प पीडितलाई निर्ब्याजी ऋण : कुरामै सीमित
काठमाडौं, वैशाख ११ – सरकारले दिने अनुदानले मात्रै घर बनाउन पुग्दैन, बैंकमा जाँदा ऋण दिँदैनन् ।
‘युद्ध हारेर फर्केका सिपाहीजस्ता मनमोहन अधिकारी’
एमालेले गठन गरेको अल्पमतको सरकारमा पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपालले उप–प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि पार्टीलाई सञ्चालन गर्न पार्टीको विधानमा नभएको तर आवश्यकता महसुस गरी उपमहासचिवको पद सिर्जना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
​भूकम्पको तीन वर्ष : कामभन्दा हल्ला धेरै
काठमाडौं, वैशाख ११ – तीन वर्षअघिको भूकम्पबाट उठीबास भएका नागरिक अझै अलपत्र छन् ।
पुनर्निर्माणपछिका घर बस्न पनि कि देखाउन मात्र ?
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिले लाखौ घर बनिरहेका छन् । तर सरकारले तोकेको नाप नक्साको आधारमा घर बनाउँदा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । तर उनीहरु चित्त नबुझेपनि घर बनाइरहेका छन् ।
गाउँगाउँमा डोजर : जनप्रतिनिधि मालामाल, नागरिकको उस्तै छ हाल
राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय ठानिएको छ । बाटो ग्राभेल गर्दा कसरी कमिसन खान पाईन्छ । कसरी कार्यकर्तालाई पोस्न सकिन्छ भन्नेमै जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रीत छ । आचार्य भन्नुहुन्छ, त्यसैको फलस्वरुप जनप्रतिनिधि र उनकै आसेपासेका डोजर गाउँमा चलेका छन् ।
गर्नु गर्‍याै रामजी भैँसी पालेर...
मासिक एक लाखको कारोबार हुन्छ, सबै खर्च कटाएर पनि मासिक ५० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ बच्ने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दूध बेचेरै वार्षिक लाखौँ कमाई हुन्छ ।’
जाँगरिला सीताराम : फलाम पिटेरै घरगाडी
केश पाकिसकेका छन् । दिन प्रतिदिन उमेर ढल्कँदो छ । तर हातपाखुरा चल्न छाडेका छैनन् । लमजुङ बेसीशहरका सीताराम कामीलाई घन, रैती, मैरी, सनासो र चर्खासँगै दैनिकी चलाउनुका मज्जा छुट्टै छ ।
विद्यालयलाई साबुन दिन नसकेपछि वादी समुदायका बालबालिका भर्नाबाट वञ्चित
बझाङको थलारा उमावि खोलीले विद्यार्थी भर्ना गर्दा साबुन माग्ने गरेको छ ।
‘न हजुरबुवा रहनुभयो, न खाइनखाई जोगाएको सम्पत्ति’
‘हाम्रो बिजोग भयो, न हजुरबुवा रहनुभयो, न खाइनखाई जोहो गरेको सम्पत्ति नै’, पीडित माया थापाले भन्नुभयो, ‘अब कसरी बाँच्ने, बच्चाबच्चीको झन बिचल्ली छ ।’